Maitiro ekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze: iwo akanakisa matipi | Green Renewables
Kuchinja kwemamiriro ekunze ndiro dambudziko guru rakatarisana nevanhu muzana rino remakore. Mamiriro ekunze edu ari kuchinja uye pamwe nawo ese mameteorological variables uye mapatani emhepo. Zvikonzero zvikuru zvekuchinja kwemamiriro ekunze uku zvinonyanya kukonzerwa nevanhu. Mabasa ehupfumi evanhu ari kuwedzera kuderera uye ari kuparadza zvisikwa zvakasikwa. Mumwe nomumwe semunhu anogona kuita zvakasiyana-siyana kuti izvi zvisawedzera. Vanhu vakawanda vanoshamisika kudzivirira kuchinja kwemamiriro ekunze.
Nokudaro, tinokurukura mazano akanakisisa ekudzidza kudzivirira kuchinja kwemamiriro ekunze.
1 Zviito zvekudzidza kudzivirira shanduko yemamiriro ekunze
1.1 Inoderedza kuburitswa
1.2 Sevha simba
1.3 Kudzora midziyo
1.4 Chinjana nemwenje we LED
1.5 Nzira yekudzivirira sei kushanduka kwemamiriro ekunze kuburikidza nekugadzirisa zvakare
1.6 Kurongedza kushoma
1.7 Kuvandudza kudya
1.9 Shandisa mvura shoma inopisa uye kutsigira zvinovandudzwa
Zviito zvekudzidza kudzivirira shanduko yemamiriro ekunze
Kana iwe uchida kutora chikamu mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze, shandisa mota yako zvine mwero. Shandisa zvifambiso zvakatsiga sezvinobvira, semabhasikoro kana kushandisa zvifambiso zvevoruzhinji. Nezve madaro marefu, chinhu chakasimba kwazvo zvitima, uye pamusoro pendege, inokonzera chikamu chikuru checarbon dioxide inobuda mumhepo. Kana uchifanira kushandisa mota, Ramba uchifunga kuti kiromita yega yega yaunomhanyisa inowedzera CO2 uye inodhura zvakanyanya. Lita rimwe nerimwe remafuta anopedzwa nemotokari rinomiririra makirogiramu 2,5 ecarbon dioxide inoburitswa mumhepo.
Nedzimwe nhungamiro diki kumba tinogona kudzidza kudzivirira shanduko yemamiriro ekunze nekuchengetedza simba. Ngationei kuti nhungamiro idzi ndedzipi:
Usasiye TV yako nekombuta zviri pastandby mode. Terevhizheni inobatidzwa kwemaawa matatu pazuva (paavhareji, vanhu vekuEurope vanotarisa terevhizheni) uye inogara yakamirira kwemaawa makumi maviri nerimwe asara, ichipedza 21% yesimba rose mukumira.
Usasiye nharembozha yako yakavharirwa mumagetsi nguva dzese, kunyange kana isina kubatana nefoni, nokuti icharamba ichidya simba.
Gara uchigadzirisa thermostat, kungave kudziyisa kana mhepo inofefetera.
Wanga uchiziva here kuti nekushandisa zvine hungwaru uye zvine hungwaru zvemidziyo yemagetsi mumba mako unogona kubatsira mukurwisa shanduko yemamiriro ekunze? Tinokupa mamwe mazano:
Fukidza chirongo apo kubika inzira yakanaka yekuchengetedza simba. Zvakatonyanya zvirinani ndezvekubikira uye zviputi, izvo zvinogona kuchengetedza 70% simba.
Shandisa dishwasher uye muchina wekugeza chete kana dzaguta. Kana zvisina kudaro, shandisa purogiramu pfupi. Hazvidikanwi kuisa kutonhora kwepamusoro, sezvo zvino detergents zvinobudirira kunyange pakupisa kwakadzika.
Recuerda, que mafiriji nemafiriza zvichapedza simba rakawanda kana zviri pedyo nemoto kana bhaira. Kana vachembera, vanyungudise nguva nenguva. Iyo nyowani ine otomatiki defrost cycle iyo inokwana zvakapetwa kaviri. Usaisa chikafu chinopisa kana chinodziya mufiriji: iwe uchachengetedza simba kana iwe ukarega ichitonhora kutanga.
Chinjana nemwenje we LED
Kutsiva magirobhu emwenje echinyakare nemagetsi ekuchengetedza magetsi anogona chengetedza anopfuura makirogiramu makumi mana neshanu ecarbon dioxide gore rega rega. Muchokwadi, yechipiri inodhura zvakanyanya, asi yakachipa muhupenyu hwako. Maererano neEuropean Commission, mumwe wavo anogona kuderedza mari yemagetsi kusvika ku60 euros.
Nzira yekudzivirira sei kushanduka kwemamiriro ekunze kuburikidza nekugadzirisa zvakare
Chinangwa che3R chekurerutsa kurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze kuburikidza nezviito zvitatu:
Inodya zvishoma uye inoshanda zvakanyanya.
Shandisa musika wekare kuti upe mumwe mukana wezvinhu zvausingachashandisi kana kuwana zvinhu zvisingadiwi nevamwe. Iwe uchachengetedza mari uye iwe uchakwanisa kuderedza kushandiswa. Dzidzirawo kutaurirana.
Recycle kurongedza, marara emagetsi, etc. Wanga uchiziva here kuti unogona kuchengetedza inodarika 730 kg yecarbon dioxide pagore nekudzoreredza hafu chete yemarara anogadzirwa mumba mako?
Sarudza zvigadzirwa zvine kurongedza kushoma: bhodhoro re1,5 litre rinoburitsa tsvina shoma pane bhodhoro re3 litres.
Paunoenda kunotenga, shandisa mabhegi anogona kushandiswa zvakare.
Dzivisa kushandisa zvipukuta zvakanyorova uye mapepa akawandisa. Kana iwe ukaderedza marara ne10%, unogona kudzivirira kubuda kwe1.100 kg yecarbon dioxide.
Kudya kwakaderera-carb kunoreva kudya zvine hungwaru uye kugadzirisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Deredza kudya nyama - Zvipfuyo ndeimwe yezvinosvibisa zvakanyanya mumhepo - uye kuwedzera kudyiwa kwemichero, miriwo nemiriwo.
Tenga zvigadzirwa zvemuno uye zvemwaka: Verenga mavara uye shandisa zvigadzirwa zvekwakabva pedyo kuti udzivise kutenga kunze uko kunenge kuine humwe hutsi hwezvifambiso.
Zvakare shandisa zvigadzirwa zvemwaka kudzivirira dzimwe nzira dzisina kusimba dzekugadzira.
Edza kushandisa zvimwe organic zvigadzirwa nekuti mishonga yezvipembenene nemamwe makemikari mashoma anoshandiswa mukugadzira.
Mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze, kuchengetedzwa kwemapoka emasango kunofanirwa kutsvakwa:
Dzivisa maitiro anogona kukonzera njodzi yemoto, sekubira munzvimbo dzechisikigo.
Kana iwe uchifanira kutenga huni, kubheja nechitupa kana chisimbiso chekwakabva.
Dyara muti. Muti wega wega unogona kutora kusvika toni yecarbon dioxide, saka iwe unozobatsira kurwisa shanduko yemamiriro ekunze.
Shandisa mvura shoma inopisa uye kutsigira zvinovandudzwa
Simba guru rinodiwa pakupisa mvura. Aya ndiwo mamwe zviito zvinopesana nekushanduka kwemamiriro ekunze izvo zvinokuchengeterawo mari:
Isa chigadziriso chekuyerera kwemvura mukugeza uye iwe unodzivirira kubuda kweanopfuura 100 kilos yecarbon dioxide pagore.
Geza nemvura inotonhora kana inodziya uye uchachengetedza 150 kilos yeCO2.
Unochengetedza mvura inopisa uye unoshandisa simba rakapetwa kana kana ukageza pane kugeza.
Dzima pombi uchikwesha mazino ako.
Ita shuwa kuti matepi ako haasi kudonha. Kudonha kunogona kurasikirwa nemvura inokwana kuzadza tabhu mumwedzi.
Chekupedzisira, chimwe chezviito zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvaunogona kuita kusarudza simba rakasvibira uye kusimudzira chizvarwa chesimba rinodzokororwa senge solar, mhepo, hydraulic, nezvimwe.
Ndinovimba kuti nemazano aya unogona kudzidza zvakawanda nezve nzira yekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Nzira yekudzivirira sei kuchinja kwemamiriro ekunze